13 Sawir -qaadayaasha Lacag -La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2022 -ka
Bogga ugu weyn 13 Sawir -qaadayaasha Lacag -La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2022 -ka
Waa Maxay Baadhaha Saamiga?
Sidee Baadhaha Badeecadu U Shaqeeyaa?
Maxay Yihiin Kuwa ugu Fiican Badeecadaha Lacag La'aanta ah?
2. Fikradaha Ganacsiga
5. Rover Stock
6. Kaydka Kaydka
10. Maaliyadda Yahoo
11. Bedelka Suuqa
12. Maaliyadda Atom
13. Motley Fool CAPS Baariyaha Hantida
Sanadihii la soo dhaafay, baarayaasha kaydka ayaa cadeeyay inay yihiin xalka wanaagsan ee siinaya maalgashadayaasha liisaska kaydka wax ku oolka ah ee ay iibsan karaan. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku dhuuntaan gadaal ujrooyin sare ama qaddar -bixinno.
Tani waa sababta aan isugu keenay liistada shaashadda kaydka bilaashka ah ee ugu fiican ee aad isticmaali karto si ay kaaga caawiso samaynta doorashada maalgashi ee saxda ah.
Ganacsatada guuleysta waxay ku tiirsan yihiin dhowr qalab oo lagama maarmaan u ah ganacsi wax ku ool ah. Mid ka mid ah aaladahaan muhiimka ah ayaa ah shaashadda saamiyada ee saxda ah oo si fiican u faahfaahsan taas oo u oggolaanaysa ganacsatada inay ogaadaan xirfadaha suurtagalka ah iyagoo soo qaadaya saamiyo ku saleysan shuruudaha la doorbiday.
Baadhayaashan kaydka ahi waxay bixiyaan shaandhooyin taxane ah oo kaa caawiya inaad xaddido raadintaada waxa run ahaantii muhiimka ah. Markay sii xoogaystaan ​​shaandhooyinka shaandhayntu, ayaa si ka sii fiican oo baarehu kaa caawin doonaa inaad doorato kaydka saxda ah ee aad rabto.
Nasiib wanaag, waxaa jira qaar ka mid ah qalabka wax lagu baaro oo lacag la'aan ah iyo sidoo kale nooca lacag bixinta ah. Baadhayaashani waxay noqdeen kuwa ugu fiican ee wax baadha saamiyada lacag la'aanta ah ee loo heli karo ganacsadaha caadiga ah.
Markaa, maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee wax baadha saamiyada bilaashka ah ee aad ku tiirsanaan karto.
Baadhaha saamiyadu waa aalad ay isticmaalaan maalgashadayaasha iyo ganacsatadu si ay u shaandheeyaan kaydka iyagoo ku salaynaya shuruudaha ay dejiyeen isticmaalayaashu.
Baadhayaasha saamiyada waxay noqon karaan lacag la'aan ama waxay ku kici karaan qaddar go'an bogagga internetka qaarkood iyo meheradaha ganacsiga. Waxay u oggolaadaan adeegsadayaasha inay doortaan aalado ganacsi oo la jaan qaadaya jaangooyooyin. Tusaale ahaan, waxay u oggolaadaan dadka isticmaala shaashadaha inay ku saleeyaan aragtida suuqa, qiimaha saamiyada, saami qaybsiga, celceliska celceliska shanta sano ee maalgashiga (ROI), iyo kuwa kale.
Qaar ka mid ah baareyaasha saamiyada ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay shaashadda ku saleeyaan xogta tilmaame farsamo- taas oo ah xisaabinta xisaabta ku salaysan qiimaha, mugga, ama danta furan ee amniga ama qandaraaska ay isticmaalaan ganacsatada raacda falanqaynta farsamada.
Ganacsatada saamiyada firfircoon waxay isticmaali karaan aaladaha baaritaanka si ay u helaan kaydad leh awood aad u saraysa si ay si fiican u qabtaan waqti ka dib.
Isticmaalayaasha waxay geli karaan tiro kala duwan oo shuruudo ah saamiyada. Marka shaandhooyin badan lagu daro, kaydka la soo bandhigay ayaa yaraanaya.
Guud ahaan, Baadhayaashu waxay u oggolaadaan maalgashadayaasha iyo ganacsatadu inay falanqeeyaan boqolaal kayd oo waqti gaaban ah, taasoo suurtogal ka dhigaysa in meesha laga saaro kaydkaas aan buuxin shuruudaha isticmaalaha oo xoogga la saaro aaladaha ku jira cabbirrada la cayimay.
Halkaan waxaa ah shaashadda saamiyada ugu fiican ee bilaashka ah ee la heli karo.
Motley doqon CAPS Stock Screener
Finviz waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee wax baadha saamiyada lacag la’aanta ah ee lagu yaqaan fududahay in la isticmaalo iyo is dhexgalka, gaar ahaan ganacsatada iyo maalgashadayaasha cusub.
Baadhaha saamiyadan bilaashka ah wuxuu leeyahay shaandhooyin badan oo kala-shaandhayn ah oo loo kala soocay sida ku cad jadwalka hoose ee si cad loo qeexay- xog aasaasi ah iyo farsamo oo waxtar u leh ganacsatada maalinlaha ah ee aan lahayn jaangooyooyin la doorbiday.
Waxaad sidoo kale riixi kartaa calaamadeeyaha saamiyada si aad u aragto shax isla markiiba u soo baxda. Si kastaba ha ahaatee, maalgashadayaasha horumarsan iyo ganacsatadu ma heli karaan shaandhooyinkooda kala -shaandhaynta oo ku filan. Tani waa sababta oo ah iyada oo aan awoodin in ay doorto xulashooyin badan oo isla goob isku mar ah. Tusaale ahaan, ma dooran kartid laba qaybood oo dhaqaale - waxaad dooran kartaa mid ama dhammaanba laakiin ma dooran kartid dhowr.
Waxaa sidoo kale jira dib -u -dhac ku yimid cusboonaysiinta xogta, mana jirto ikhtiyaar shaandheyn si loo arko kaliya ETF ama natiijooyinka saamiyada. Haddii aad rabto xog-waqtiga dhabta ah, waxaad u cusboonaysiin kartaa Finviz Elite. Waxay ku siineysaa marin u helka astaamaha buuxa waxayna ku kacaysaa $ 39.50 bishii ama $ 299.50 sanadkii.
WAX BADAN KA EEG FINVIZ
Fikradaha ganacsigu waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee baaraya saamiyada Mareykanka. Software -kiisu wuxuu ka caawiyaa ganacsatada inay helaan jaangooyooyinka ugu fiican ee suuqa iyo saamigee awood u leh.
Madalku si dhakhso leh buu u socdaa, iyada oo xarumaheeda xogtu si istiraatiiji ah ugu yaalliin meel u dhow is -weydaarsiyada saamiyada waaweyn. Waxay kaloo bixisaa hodan baaritaanno horumarsan, oo aad adigu u habayn karto kuna dari karto shuruudahaaga gaarka ah. Oo haddii ay tahay markii kuugu horreysay, Fikradaha Ganacsiga ayaa bixiya waxbarashada, ku-dhaqanka, iyo taageerada aad u baahan tahay si aad u noqotid maalgaliye is-hagta oo guuleysta.
WAX BADAN KA EEG FIKRADAHA GANACSIGA
TradingView waxay bixisaa madal baaritaan dabacsan oo la yaab leh oo jaban ama kharash la'aan ah.
Waxaad baari kartaa kaydka iyo ETF-yada iyada oo aan loo baahnayn is-qoritaan oo aad ogaato fursadaha badan ee la heli karo. Iyada oo leh in kabadan 100 shaandheyn aasaasi ah, waxaad ku kala saari kartaa saamiyada si sax ah. Waxa kale oo aad eegi kartaa saamiyada ama ETF -yada, ama si fudud ugu beddel labada.
Meel gaar ah oo ka mid ah baarahaan kaydka ah ee lacag la'aanta ah waa baaxad ballaaran oo maalgashiyo iyo maalgelinno ah oo ay ku jirto. Waxaa ka mid ah kaydka caalamiga ah iyo lacagaha laga helo adduunka oo dhan, taas oo kuu oggolaanaysa inaad isbarbar dhig ku samayso saamiyada Ameerika iyo ajnabiga oo leh qalab isku mid ah. TradingView waxay kaloo bixisaa nidaam qiimeyn fudud oo loogu talagalay dammaanadaha. Waxay tilmaamaysaa haddii ay tahay “iibso,” “iibi,” “iibsasho xooggan,” ama “iibin xoog leh.”
TradingView waxay leedahay ikhtiyaarro bilaash ah iyo kuwo qaali ah labadaba. Nooca bilaashka ah wuxuu leeyahay xayeysiis laakiin sidoo kale waxaa ku jira shaqeynta inteeda badan. Si aad u hesho astaamaha iskaanka iyo xogta dhoofinta, waxaad u baahan tahay rukunsi lacag -bixin ah. Waxay bixiyaan tijaabo 30-maalmood oo bilaash ah, akoonnada Premium waxay ka bilowdaan $ 15 bishii.
WAX BADAN KA EEG DHIBAATADA GANACSIGA
Zack waa shaashad kale oo lacag la'aan ah oo si fiican loogu yaqaanay nidaamka qiimeynta, iyo baaraha bilaashka ah wuxuu bixiyaa qaddar la yaab leh oo shaqeynaya, oo leh cabbirro badan.
Sababta ugu weyn ee maalgashadayaashu u isticmaalaan Zack ayaa ah inay kuu oggolaanayso inaad sheegto qiyamka aad rabto inaad u isticmaasho baaritaanka, halkii aad ka aqbali lahayd qiimihii hore loo dejiyey ee shaashaduhu bixiyo. Waxaad baari kartaa kaydka adiga oo adeegsanaya mid ka mid ah meheradaha badan ee aasaasiga ah iyo cabbirrada maalgashiga.
Waxa kale oo ay bixisaa dakhli faahfaahsan halkii natiijo raadin wadaag ah sida la yaabka dakhliga, tallaabooyinka ku saleysan qiimeynta, saami qaybsiga, iyo aragtiyaha falanqeeyaha ee saamiyada. Awoodda kaydinta shaashadaha iyo dhoofinta natiijooyinka xaashida xaashida ayaa si gaar ah qiimo u leh.
Si kastaba ha noqotee, Weli waxaad fursad u leedahay in aad waxoogaa astaamo ah ku haysato Zacks haddii aadan rabin inaad iska bixiso rukunka.
WAX BADAN KA EEG ZACKS
Stock Rover waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee baareyaasha saamiyada lacag la’aanta ah ee si weyn loogu isticmaalo kaydka ku saleysan Mareykanka iyo Kanada. Waxay leedahay shaandhooyin badan oo kala -shaandhayn ah oo ay sidoo kale isticmaali karaan ganacsatada maalinlaha ah si ay u cabiraan ETF -yada iyo lacagaha wadaagga ah.
Iyada oo la adeegsanayo Stock Rover, waxaad ku abuuri kartaa isleegyo isku dhafan, waxaadna ku dari kartaa shaandhooyin badan si aad u hagaajiso natiijooyinkaaga.
Stock Rover wuxuu kaloo bixiyaa astaamo iskaan oo adag, oo leh xogtiisa, iyo miirayaasha oo cusbooneysiiya daqiiqad kasta. Stock Rover wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa maalgashadayaasha muddada dheer. Waxay ku milmi kartaa koontadaada kale ee dilaalnimada, sida TD Ameritrade, oo marka la isku daro, waxay bixisaa talooyin ballaadhinta dib -u -dheelitirka ballaaran ee qoondaynta hantidaada, iyo falanqaynta faylalka.
Guud ahaan, shaqooyin badan ayaa diyaar u ah dhammaan isticmaaleyaasha, in kasta oo adeegsadayaasha lacagta leh ay heli karaan astaamo dheeri ah sida isleegyada, dhoofinta xogta, filtarrada, falanqaynta faylalka, iyo digniinta.
Qorshaha xubin-nimadeedu wuxuu ku jiraa saddex heer- diiwaangelin heer-gal ah oo la bixiyo oo qiimihiisu yahay $ 79.99 sanadkii, qorshaha Premium oo ah $ 179.99 sanadkii, iyo qorshaha Premium Plus oo qiimihiisu yahay $ 279.99 sanadkii.
WAX BADAN KA EEG STOCK ROVER
Dadka, oo akhriyay nuxurkan, ayaa waliba akhriya Dib -u -eegista La -taliyaha La -talinta ee Motley Fool: Ma mudan tahay?
Stock Fetcher waa mid ka mid ah baareyaasha ugu fiican ee loo heli karo ganacsatada maalinlaha ah ee jecel inay yareeyaan liistadooda kaydka suurtagalka ah ilaa dhowr kayd.
Way adkaan kartaa in marka hore la fahmo. Laakiin marka ugu dambaysa ee aad la qabsato, waxay siisaa barxad baaris oo adag ganacsatada garanaysa waxay si sax ah u raadinayaan ganacsi.
Stock Fetcher waa mid ka mid ah dhawrka baare ee kaydka bilaashka ah ee kuu oggolaanaya inaad dejiso xuduudahaaga oo keena raadinta aad u faahfaahsan.
Nooca xorta ah ee Stock Fetcher wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto 5 kayd oo mar keliya tanina waxay aad ugu filan tahay ganacsade maalin yaqaan oo dantiisa yaqaan. Si kastaba ha noqotee, si aad u aragto dhammaan natiijooyinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad sare ugu qaaddo qorshe sare. Tani waxay ka bilaabataa $ 8.95 bishiiba.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN FETCHER
Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee baaraya saamiyada bilaashka ah waa TD Ameritrade. Baadhaha saamiyadan waxaa loogu talagalay ganacsiga maalinlaha ah wuxuuna ka mid yahay dillaaliintii ugu horreysay ee khadka tooska ah ee taga komishan la'aan.
Baaritaanka waqtiga-dhabta ah iyo baarista, waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo aaladda Hacker Stock. Sida shaandheeyeyaasha kale, Hacker Stock wuxuu leeyahay xulashooyin shaandheyn oo aad u ballaaran. Tusaale ahaan, waxaad iska baari kartaa waqtiga dhabta ah saamiyada leh qaabab farsamo oo gaar ah sida calanka, kanaalada, iyo jeexjeexyada isla markaana isla markiiba ka iibso masraxa.
Guud ahaan, yoolka TD Ameritrade ayaa ah inuu kugu soo jiido meheradda ganacsiga si aad u maalgaliso koontadaada oo aad ugu beddesho dillaalka ganacsiga maalinlaha ah.
Si aad si fudud ugu hesho dhammaan astaamahan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad la furto koonto dilaalnimo.
WAX BADAN KA EEG TD AMERITRADE
TC2000 waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee baareyaasha kaydka tooska ah ee internetka laga heli karo suuqyada US iyo Canada STock. Waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah xuduudaha baaritaanka aasaasiga ah iyo farsamada.
Tilmaam gaar ah oo TC2000 ah ayaa ah inay kuu oggolaaneyso inaad abuurto shuruudahaaga baarista oo aad u diyaarsato lakabyo jaantusyo muuqaal ah. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad habaynayso digniino si ay kuu ogeysiiso goor hore marka isku -darkaaga caadadu u habboon yahay si sax ah. Iyada oo ay weheliso iskaanka waqtiga-dhabta ah ee degdegga ah, waxay ka dhigaysaa madal aad u fiican ganacsatada maalinlaha ah.
Dhinaca hoose, TC2000 waxay u timaadaa sidii softiweer la soo dejiyey si kastaba ha noqotee, adeegsadayaashu waxay ka cawdaan inaysan siinayn khibrad ugu badan sida degelkeeda tooska ah.
Sida kuwa kale ee baaraya saamiyada, TC2000 waxay leedahay labadaba nooc bilaash ah iyo ikhtiyaar qaali ah. haddii aad jeclaan lahayd inaad kor ugu qaaddo ikhtiyaarka lacagta qaaliga ah, waxay ku kacaysaa $ 10 bishii.
WAX BADAN KA EEG TC2000
Chartmill waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee baareyaasha kaydka ee la heli karo. Waxay bixisaa astaamaha caadiga ah ee shaashadda saamiyada heerka koowaad, oo leh cabbirro kala duwan oo la heli karo iyo diirad gaar ah tilmaamayaasha farsamada.
Intaas waxaa sii dheer, ChartMill wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale ee baaraya saamiyada isagoo bixiya dhowr cabbir oo si toos ah u horseedaya ganacsi, taas oo ku habboon ganacsatada maalinta bilowga ah ee aan weli horumarin xeeladaha ganacsi ee u gaarka ah.
Nashqadeeyaha shaashadda lacag la'aanta ah ee ChartMill wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka amaahda, oo leh tiro go'an oo dhibco lacag la'aan ah oo la heli karo bil kasta. Mar kasta oo aad isticmaasho ChartMill, waxaad ku bixisaa qaar ka mid ah dhibcahaaga bilaashka ah. Tirada dhibcaha waa inay ka badan tahay inta ku filan xeeladaha ganacsiga maalintii, laakiin sidoo kale waad iibsan kartaa dhibco badan haddii aad u baahato.
WAX BADAN KA EEG CHARTMILL
Yahoo Finance waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee baareyaasha saamiyada ee bilaashka ah la heli karo. Waxay leedahay interface si sahlan loo isticmaali karo oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay u socdaan dhowr qaybood oo goobta ah.
Iyada oo ay weheliso fududeynteeda adeegsiga, shaashaddaan bilaashka ah waxaa ka mid ah xigashooyinka qulqulka bilaashka ah, shaandhooyinka xogta ESG, iyo natiijooyinka ay ku jiraan tiirarka xogta aasaasiga ah ee Yahoo Finance. Intaa waxaa dheer, waxay u arki karaan natiijooyinka khariidada kulaylka. Waxay ku bixisaa dhammaan astaamahan bilaash.
Si kastaba ha ahaatee, Yahoo Finance ayaa ka maqan ikhtiyaar sifeyn oo farsamo iyo qoto dheer leh.
WAX BADAN KA EEG MAALIYADDA YAHOO
Sidoo kale akhri tan, 10 Kaydka Abaalmarinta Sare ee Khatarta Yar | Maalgashiga Hantida
Beddelka Suuqa waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee baareyaasha kaydka ee la heli karo. Xirmadan jaantuska ah ee ka socota maalgashadayaasha.com (Maal -gashadayaasha Maal -gashiga Maalmeed) waxay bixiyaan xirmooyin jaantus oo aad u fiican kuwaas oo ay ku jiraan marin -hayaha oo ay weheliyaan liiska IBD oo dhan ee qiimeynta lahaanshaha.
Qiimeyntan lahaanshaha gaarka ah waxay ka caawiyaan maalgashadayaasha inay aqoonsadaan oo ay soo qaataan saamiyo macquul ah oo ay ku dhaqmaan.
Si aad u hesho astaamaheeda oo dhammaystiran, bixi khidmad dhan $ 149.95/bishii.
ARAG WAX BADAN OO KU SAABSAN DHAQANKA SUUQA
Atom Finance waxay ujeedadeedu tahay inay ku siiso agabyada maalgelinta casriga ah farahaaga iyadoo kuu oggolaanaysa inaad ku darto xisaabaadkaaga kale ee dilaalnimada. Tani waxay kaa caawineysaa inaad la socoto dhammaan faylalkaaga maalgashiga hal dhibic.
Intaas waxaa dheer, waxaa jira qalab baaritaan sare oo sarsare oo kaa caawinaya inaad baarto kaydka shaqsiyeed iyo isbeddellada ballaaran oo laga bilaabo xigashooyinka saamiyada ee waqtiga-dhabta ah iyo quudinta wararka maaliyadeed ee hay'ad.
Waxa kale oo jira xog shirkadeed oo la heli karo sida diiwaangelinta SEC iyo qoraallada, saadaasha falanqeeyaha, cilmi -baarista sinnaanta ee dhammaan bangiyada waaweyn iyo shirkadaha maaliyadeed, iyo talooyinka. Raadinta dokumentiga horumarsan ee Atom wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka raadsato jumlado maqaallo badan oo wargeysyo ah, soo gudbinta, iyo qoraallada si aad u ogaato isbeddellada iyo qaababka qarsoon.
Warka fiicani waa in Maaliyadda Atom dhammaantood waa bilaash. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay sii deyso nooca ugu sarreeya.
WAX BADAN KA EEG MAALIYADDA ATOM
Baadhaha kaydka CAPS ee Motley doqonku wuxuu ku jiraa liiska kuwa ugu fiican ee baaraya saamiyada. Baadhaha kaliya kuma oggola inuu ku baaro maaliyadaha caadiga ah iyo cabbirrada aasaasiga ah laakiin wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad gasho aqoonta wadaagga ah ee bulshada CAPS, oo ay ku jiraan qiimaynta xiddigaha ee saamiyo kasta oo ay go'aamiyaan xulashada shaqsiyeed ee xubno badan oo Doqon ah oo adeegsada nidaamka.
Tirada cabbiraadaha laga heli karo Motley Fool CAPS baaraha saamiyada ayaa ka yar waxa aad ka heli doonto baareyaasha kale ee saamiyada. Laakiin fikradaha ay qiimaynta xiddigaha CAPS bixiyaan waxay noqon karaan lama huraan inay kaa caawiyaan inaad ogaato haddii maalgashadayaasha kale ay danaynayaan isla waxyaabaha aad fiirineyso, ama haddii aad si dhab ah u kashiftay hanti yar oo qarsoon.
Iyada oo sannado badan oo waayo -aragnimo ah iyo sheekada guusha ee Motley Fool, mid aan muran lahayn ayaa odhan kara kani waa doorasho wanaagsan.
WAX BADAN KA EEG MOTLEY FOOL
Raadinta kaydka wax -ku -oolka ah ayaa ah tallaabo weyn oo lagu maal -gashado sidaa darteedna maal -gashadayaashu waxay raadiyaan qalabka wax -baadha ee ugu fiican ee la isticmaalo.
Maxaa ka sii xiiso badan ayaa ah in ay jiraan qaar ka mid ah qalabka wax lagu baaro oo ku siiya macluumaadka loo baahan yahay dhammaantood bilaash?
Way fiicantahay inaad akhrido boostada oo aad ogaato qalabka ugu fiican ee wax lagu baaro ee la heli karo.
Faallooyinka Robinhood vs Acorns: faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso